Qaramada Midoobay oo eedeeyn kulul u jeedisay ciidamada Kenya ee ku sugan magaalada Kismaayo.
on July 14 2013 Warbixin ay soo saareen kooxda dabagalka Soomaaliya iyo Eritrea ee Qaramada Midoobay ayaa lagu sheegay in ciidamada Kenya ee ka tirsan kuwa Midowga Afrika AMISOM ay si sharci daro ah u fududeeyaan in dhuxusha ay ka dhoofto dekadda magaalada Kismaayo ee xarunta gobalka J/hoose.
Ciidamada Kenya ee ku sugan magaalada Kismaayo ee xarunta gobalka J/hoose ayaa beeniyay warbixin sanadeedka ay soo saareen kooxda dabagalka arimaha Soomaaliya iyo Eritrea ee Qaramada Midoobay.
Warbixintaan ayaa lasoo gaba gabeeyay ka hor dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Kismaayo ee xarunta gobalka J/hoose.
Dagaalkaasi ayaa dhex maray ciidamo maleeshiyaad ah oo ku loolamaya gacan ku haynta magaalada Kismaayo, ka dib markii hogaamiyaha ururka Raaskambooni Sheekh Axmed Madoowe loo doortay madaxweynaha maamulka Jubbaland, kaas oo lagu dhisay bishii May ee sanadkaan.
Xaaladda magaalada Kismaayo ayaa weli ah mid kacsan, inkastoo dowladda Soomaaliya ay kasoo horjeesatay dhisida maamulka Jubbaland ee uu hogaaminaayo Sheekh Axmed Madoobe.
Golaha amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa bishii February sanadkii 2012-kii xayiraad kusoo rogay in dekadda magaalada Kismaayo laga dhoofiyo dhuxusha sharci darada ah, iyadoo ay aheyd isha ugu weyn ee dhaqaaluhu kasoo gali jiray Xarakada Al-shabaab, kuwaas oo muddo sanadooyin ah halkaasi gacanta ku haayay.